USAHello आफ्नो गोपनीयता पक्षहरूमा.
यस गोपनीयता सूचना लागि गोपनीयता अभ्यासहरू discloses usahello.org. यस गोपनीयता सूचना यो वेबसाइट संकलित जानकारी केवल लागू. यसलाई निम्न सूचित गर्नेछौं:
तपाईं कुनै पनि समयमा हामीलाई कुनै पनि भविष्यमा सम्पर्क बाहिर निस्कन सक्छ. तपाईं हामीलाई सम्पर्क गरेर कुनै पनि समयमा निम्न गर्न सक्नुहुन्छ: privacy@usahello.org.
तपाईं कुनै पनि प्रश्न छ वा यदि लाग्छ भने हामी यस गोपनीयता नीति पालन छैन, तपाईं मा इमेल मार्फत तुरुन्तै हामीलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ: privacy@usahello.org.